Xiisadda ka dhex oogan Kenya iyo Somalia oo xaalad adag ka abuurtay KENYA - Banaadisom
Home Wararka Maanta Xiisadda ka dhex oogan Kenya iyo Somalia oo xaalad adag ka abuurtay...
Xiisadda ka dhex oogan Kenya iyo Somalia oo xaalad adag ka abuurtay KENYA
Xiisadda Diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Somaaliya iyo Kenya ayaa saameyn taban ku yeelatay ganacsatada khaadka Kenya, waxeyna dadka ka ganacsada iyo kuwa tabcadaba ay sheeganayaan nolol xumo aad u liidata.
Xiisada labada dal aad ayey usii xumaatay kadib markii todobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeertay safiirkii u fadhiyay dalka Kenya, waxaana xigay in midka Kenya u fadhiyay Muqdisho ay ku amartay inuu tashi ugu laabto dalkiisa.
Horaantii sanadkaan dowladda Soomaaliya waxey joojinta khaadka sabab uga dhigtay jiritaanka xanuunka COVID19, balse waxaad moodaa in bilooyinkii ugu dambeeyay ay soo baxday iney arintu ka weyn tahay maadaama khaad laga keeno dalka Itoobiya la geeyo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya.
Marry Ntonja oo ah haweeney dalka Kenya u dhalatay kana mid ah beeraleyda khaadka ayaa BBC-da uga warbixisay xaaladeeda nololeed tan iyo markii la joojiyay khaadka, waxeyna sheegtay iney waayeen wax ay cunaan.
“Dhibaato noolaleed ayaan dareemeynaa, waxaa nasoo wajahay faqri, lacag la’aan darted, in aan wax cunno waa dhib, dharkii way naga dhammaadeen, caruurta wax aan siino ma lahan, dhibaato ayaa inagu habsatay tan iyo markii la mamnuucay in la dhoofiyo jaadka” ayay tiri Marry oo la hadleysay BBC-da.
Beeraleyda Jaadka waa markii labaad oo ay la kulmayaan jab weyn maadaama lix sano ka hor dalweynaha Britain laga joojiyay in loo dhoofiyo khaadka, waxeyna taasi keentay in suuqa ugu weyn oo ay heystaan dadka reer Kenya uu noqdo Soomaaliya.
Sida laga soo xigtay ururka ay ku midoobeen ganacstada jaadka Kenya, maalintiiba 50 tan oo khaad ah ayey u dhoofin jireen Soomaaliya, waxeyna ka heli jireen lacag lagu qiyaasay 140 kun oo Doolar, balse waxaas oo dhan meesha ayey ka baxeen waxaana soo wajahday nolol xumo baahsan.
Inta la ogyahay Dowladda Soomaaliya waxey Kenya ku eedeysay ineysan dhanka diblomaasiyadda aad ugala shaqeyn, waxeyna hordhigtay shuruudo adag si loo fasaxo jaadka.
Walow ay Kenya beenisay hadana Kenya waxaa lagu eedeeyay iney si dadban faragalin ugu heyso siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan garab siinta kooxaha mucaaradka ku ah dowladda maadaama lugaha lasii galinayo wakhtiyada Doorashada. 5fcf3400ad85a
Previous articleSomaliland oo fariin cusub oo ka dhan ah Soomaaliya u dirtay Beesha Caalamka
Next articleXOG: Deni iyo Farmaajo oo ku wada-hadlay teleefoon iyo natiijadii kasoo baxday